I-china Multi-axial Neck of Humerus yokutshixa iPlate mveliso kunye nabenzi | IShuangyang
Intamo ye-axial ye-humerus ipleyiti yokutshixwa kwamathambo
Idilesi yokuqhekeka okunzima kwe-humerus esondeleyo
2. I-Titanium kunye netekhnoloji yokuqhubekeka phambili;
Intamo ye-axial ye-humerus yokutshixa ipleyiti eboniswe ngokwaphuka kunye nokuqhekeka kokuqhekeka, i-osteotomies kunye ne-nonunion ye-proximal humerus, ngakumbi kwizigulana ezinethambo le-osteopenic.
Isetyenziselwa ukujija i-.04.0, screw3.5 isikrufu se-cortex kunye ne-.04.0 ye-Screwcellous Screw, ehambelana ne-4.0 series orthopedic instrument set
I-Multi-axial Neck ye-Humerus yokuCacisa iPlate
Intamo yeHumerus Plate yokuTshixa
Intamo yesitshixo sokutshixa i-humerus yidilesi yokwahlukana kwezinto ezintsonkothileyo ze-humerus ehamba phambili.
Umqala weplanethi yokutshixwa kwezonyango eboniswe ngokwaphuka kunye nokuqhekeka kokuqhekeka, i-osteotomies kunye ne-nonunion ye-proximal humerus, ngakumbi kwizigulana ezinethambo le-osteopenic.
Isetyenziselwe i-.04.0 yokutshixa isikrufu, cortex3.5 isikrufu se-cortex kunye ne-.04.0 ye-Screwcellous Screw, ehambelana ne-4.0 sethi yezixhobo zotyando.
Intamo yeHumerus yokuCacisa ukuCacisa iPlate
Itafile yethambo ye-titanium eyenziwe yinkampani yethu yenzelwe ngokwe-PRINCIPLE ye-AO fixation yangaphakathi, imigangatho ye-ISO5836 kunye nemigangatho efanelekileyo yesizwe okanye yezorhwebo. Ukupasa kwesikwere setyiti yethambo ye-titanium kuyilelwe ngokupasa okuqhelekileyo kunye nokugqitha kwemisonto ngokwahlukeneyo. Iipleyiti ze-titanium ezichanekileyo kunye ne-anatomic ziyilelwe intloko ngokokuma kwethambo.
Ipleyiti yokutshixa ithambo efumanekayo kwi-titanium, ii-Orthopedics zokuCoca iiPleyiti, ezaziwa ngokuba yiLocing Compression Plates nayo, yindibaniselwano yetekhnoloji yokutshixa kunye neendlela eziqhelekileyo zesingxobo. Amacwecwe okuTshixa ama-Orthopedic aveliswa ngobukhulu obahlukeneyo. Amacwecwe kunye nezikrufu zibandakanyiwe kuzo. Inkqubo yokutshixa yenza ukuba ukulungiswa kweplate kungavumi ukusilela, kuba isikrufu asitsali, kwaye asikhululeki.
Ukutshixa iipleyiti zethambo kwenziwa yitanium engasebenziyo ehambelana ne-ISO5832-2 okanye i-GB / T 13810-2007. I-MRI kunye ne-CT inokwenziwa emva kokusebenza. Izixhobo ezikhethekileyo zokuxhasa zibonelelwa, zisenza imveliso isebenziseka lula, ikhuselekile kwaye ithembekile. Imingxunya yokudibanisa equka imingxunya enomsonto kunye nemingxunya yoxinzelelo kwipleyiti yokutshixa inokusetyenziselwa ukutshixa kunye nokucinezelwa, ekulungele ukuba ugqirha akhethe. Unxibelelwano olulinganiselweyo phakathi kwethambo lethambo kunye nethambo kunciphisa ukutshatyalaliswa kwegazi le-periosteal.
Amacwecwe amathambo e-Titanium njengezinto zokufakelwa kwamathambo zinikezelwa kumaziko ezonyango, kwaye zenzelwe ukunyanga iindawo eziqhekezayo zezigulana eziphantsi kweanesthesia ngokubanzi ngoogqirha abaqeqeshiweyo okanye abanamava kwigumbi lokusebenza ngokuhambelana neemfuno zokusingqongileyo.
Izinto zokumilisela ngaphakathi ziya kujongwa ngononophelo ngaphambi kokusetyenziswa, kwaye zingasetyenziswa kwangoko kwimeko yokwahluka kunye nokukrwela. Hlaziya uhlobo lokophuka ngokwefilimu ye-X-ray yendawo eqhekekileyo, yenza indlela yotyando, kwaye ukhethe uhlobo olufanelekileyo kunye nokubalulwa kwetafile yethambo ye-titanium. Amacwecwe amathambo eTitanium ahlala esuswe kwisithuba seminyaka emi-2 emva kokuphola ngokwaphuka.
Egqithileyo Ipleyiti yokutshixa iClavicle Hook
Okulandelayo: I-Anterior Humeral Plate yokutshixa okumile
Isinye kwisithathu seTyhubhu yokuTshixa iTubular
Inkqubo yesandla sePlate yeTitanium eyi-2.0mm
Icala lokuTshixa iRadiyo esecaleni
Plate yokutshixa eyi-3.0mm